महिला टी ट्वान्टी क्रिकेटः शनिबार चीनसँग भिड्दै नेपाल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महिला टी ट्वान्टी क्रिकेटः शनिबार चीनसँग भिड्दै नेपाल
काठमाडौं । थाईल्याण्डमा हुने महिला टी ट्वान्टी स्मास क्रिकेटमा नेपालले शनिबार चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । थाईल्याण्ड क्रिकेट एसोसियसनले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा खेल तालिका परिवर्तन भएअनुसार नेपाल समुह एमा रहेको छ । नेपाल रहेको समुह एमा युएई, चीन, मलेसिया र थाईल्याण्ड छन् ।
त्यस्तै, समुह बीमा थाईल्याण्ड, हङकङ, ईन्डोनेशिया, भुटान र म्यानमार छन् । परिवर्तित खेल तालिका अनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा शनिबार चीनसंग खेल्नेछ । त्यस्तै, आगामी आईतबार मलेसिया, सोमबार युएई र बुधबार थाईल्याण्डसंग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । समुहका शीर्ष दुई टोली अन्तिम ४ मा प्रवेश गर्नेछन् ।
यसअघिको तालिका अनुसार नेपाल रहेको समुहमा तान्जेनिया, नामिविया, ईन्डोनेशिया र कुवेत समावेश थिए । थाईल्याण्ड उड्नु अघि नेपाली महिला टिमका मुख्य प्रशिक्षक विनोद दासले थाईल्याण्डमा हुने प्रतियोगितामा नेपाली महिला क्रिकेटको वास्तविक धरातल थाहा हुने बताएका छन् । महिला क्रिकेटको गतिविधि शुन्य प्राय रहेको अवस्थामा मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका दासले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महिला क्रिकेटको अवस्थामा बुझ्न थाईल्याण्ड भुमि उपयोगी हुने बताएका हुन् ।
पुर्व कप्तान समेत रहेका दासले नेपाली पुरुष क्रिकेट टिमको सहायक प्रशिक्षकको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । महिला क्रिकेट टिमले दुई महत्वपुर्ण प्रतियोगिता खेल्ने तय भएपछि दासलाई नेपाली महिला क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिईएको थियो ।
पहिलो पटक नेपाली महिला टिमको नेतृत्व गरेर थाईल्याण्ड निस्कन लागेका प्रशिक्षक दासले नेपालले राम्रो खेल्ने प्रयास गर्ने बताए । टिमको मुख्य लक्ष्य खेल जित्नुनै रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो स्वभाविक खेल पस्किने उल्लेख गरे ।
रुबिना क्षेत्री (कप्तान)
सिता राना मगर (उपकप्तान)
ममता कुमारी चौधरी